DAAWO: M/weynaha Puntland oo xalay si cajiib ah uga hadlay xariirka kala dhaxeeya Muqdisho.
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo xalay la hadlayay qaar kamid ah bulshada Puntland oo kulan furan kula yeeshay Jaamacadda PSU, ayuu ka hadlay xariirka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulkiisa, wuxuuna sheegay in aysan marnaba jirin xariir ay joojiyeen.
Madaxweynaha Puntland, wuxuu sheegay in arrimaha siyaasiga ah ee ay isku hayaan dawladda Faderaalka ay yihiin arrimaha la xariira in si siman loo qeybsado mashaariicda horumarineed ee lagu helo magaca Soomaaliya iyo talada la wadaago.
Madaxweyne Deni, wuxuu weydiiyey dadweynihii uu la hadlayay in ay ogol yihiin in laga aamuso in Xaquuqda Puntland si gaar ah ay u qaadato dawladda Faderaalku, taas oo ay MAYA ugu jawaabeen.
Mr, Deni ayaa cadeeyey in waxyaabaha markasta keena khilaafka iyo is jiid-jiidku uu yahay in aysan marnaba Madaxda Soomaaliyeed ogoleyn in la xisaabtamo oo runta laga wada hadlo, balse ay doonayaan wax aysan ku jirin danta ummadda Soomaaliyed, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Puntland iyo dawladda Faderaalka ma jiro xariir siyaasaded oo ka dhaxeeya, gaar ahaana arrimaha ku wajahan doorashooyinka, Sharciyada loo gudbinayo baarlamaanka, Kheyraadka Dabiiciga, Mashaariicda, Dibu eegista Dastuurka iyo qodobo kale oo ay joojisay Puntland.
Sidaas oo ay tahay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal Sh Cabdiraxmaan ayaa kusugan magaalada Garoowe, sidaas oo kale shalay waxaa soo gaaray gudoomiye kuxigeenka Aqalka Sare ee Soomaaliya Senator Axmed Bukhaari oo ka qeybgalaya xuska habeen dambe lagu qabanayo Garoowe.
Kaas dambena maxaa idiin keenay? iska erya.
Hadda xamar kama jirto wax dawlad lagu sheegi karo.Waayo nimanka meesha joogaa waxayba ku mashquulsan yahiin baabi’inta maamulada dhisan ee maamul gobaleedyada soomaaliya oo xamarba way ilaaween.Xamar baysan wada maamulin oo looga awood roon yahay.Maamul xugi waayey magaaladuu dagan yahay maxuu u sheegayaa maamul gobaleedyada aadka uga fog?Waa waxba oo waxba meesha kuma hayaan Ina farmaajo iyo Xassan Cali Khayre.
Comments kaygii ma xamiliweydey!!!!
Aqoontii waa Iftiin, Aqoon darraduna waa Mugdi.